Japana: Niverina Ny Hetran’ny Solika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2018 5:46 GMT
. (Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2008)
Naverina indray ilay hetra “vonjimaika” -n'ny solika any Japana [ja], 25 yen isaky ny litatry ny lasantsy, izay nohalavaina 30 taona sady namatsiana fandaharanasa fanamboarana làlana 5000 eo ho eo, taorian'ny ady fohy nifanaovana tamin'ny mpanohitra, tsy faly amin'izany ny vahoaka. Nidina ho 25% indray ny fitokisan'ny vahoaka ny Praiministra Fukuda Yasuo raha 31 tamin'ny faran'ny volana martsa araka ny fitsapàna ny hevitry ny olona nataon'ny gazety Asahi tamin'ny 21 Aprily. Nandritra izany fotoana izany, nasehon'ilay fitsapàna fa tsy ankasitrahan'ny 63%-n'ny japone ny famerenana ny hetran'ny solika, fahatsapàna izay hita taratra any amin'ny bilaogy sy ireo sehatra hifanakalozan-kevitra ihany koa.
Niakatra avy any amin'ny 25 yen ho amin'ny 158 yen/litatra ny vidin'ny solika any Tokyo tamin'ny faha-2 May 2008 (ao amin'io toby fitsinjarana solika any tokyo io).
Kianin'ny mpitoraka bilaogy Spray ireo olona izay mankasitraka ilay hetran'ny lasantsy satria mihevitra ry zareo fa hanampy ny tontolo iainana izany :
Misy karazana fijery maro eo amin'ireo mpankasitraka [ny hetran'ny lasantsy], nefa ilay anankiray miresaka ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana no mampihomehy ahy. Misy ny tatitra momba ireo fahasarotan-javatra ao Japana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo fiara vaovao tsy misy mividy intsony, tsy midika izany fa hoe nidina ny hetra dia hiakatra be tampoka amin'ny fomba mahagaga ny fanjifàna. Ny antony dia misy enta-mavesatra goavana ara-toekarena ny fikojakojàna fiara iray, ary any an-kafa amin'ny faritra izay tsy misy rafitra fitateram-bahoaka, sy any an-kafa izay ny olona tahaka ahy tsy maintsy mampiasa fiara amin'ny asany, dia tsy misy ilàn-dry zareo izany. Raha ampitahaina tamin'ny andro fahiny, dia voalaza fa efa nialàn'ny tanora amin'izao fotoana izao ny fanànana fiara, noho izany dia tokony tsy misy antony manokana hitomboan'ny CO2.
Notantarain'ny mpitoraka bilaogy bluetear ny zavatra niainany tamin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika
Omaly, nandeha teny amin'ny toeram-pitsinjaràna solika izay falehako matetika aho, saingy efa nisy filaharana lavabe teo.
Gaga aho… fa be ny olona mirohotra maka solika amin'ny minitra farany
Nameno ny fitoeran-tsoliko tamin'ny 125 yen aho omaly, fa heveriko fa tsy hampino ny fiakatr'io vidin-tsolika io amin'ny manaraka, sa tsy izany ?
Miaraka amin'ny tsy fisian'ny dibera tamin'ny farany teo sy ny fidangan'ny vidiny, ary ny fiakatry ny vidin-javatra hafa toy ny lafarinina, dia mananosarotra ny fandrakofana ny fandaniana ao an-tokatrano ・.。*゜・。。・゜／【＞△＜】＼
Ary ianareo ry zalahy, niakatra ve ny vidin'ny solika any aminareo ?
Nanana olana ny mpitoraka bilaogy kochibox :
Rehefa andeha hiasa aho ny maraina, efa nisy fiara manodidina ny 30 na 40 teo ho eo nilahatra hameno ny fitoeran-tsolikany.
“Eny, heveriko fa hitony kely izany rehefa tafaverina avy miasa aho, ” hoy aho am-pitoniana,
nefa tsy izay no marina ! Mbola nihalava ihany ny filaharan'ny fiara, bibilava lava be [ miaraka amin'ny fiara maro be ] tsy voaisanao izy ireo !
Araka ny efa nandrasana, tsy nanana hery hilaharana aho tamin'ny fiverenako avy niasa noho izany dia nody avy hatrany, nefa niheveriko fa tsaratsara kokoa raha nameno aho …
Aorian'ny sakafo hariva, hihatsara izany … niaraka tamin'io karazana eritreritra feno fanantenana io, dia nanainga hiatrika ady aho !
Ary mazava ho azy, faharesena mavesatra ilay izy.
Niala tamin'ilay ‘self-service’ (manira-tena) aho ary nitodi-doha ho eny amin'ny toby fitsinjarana solika akaiky teo, fa rehefa tonga teny aho
dia nisy soratra hoe : “Lany” !!
Voalohany izao no nahitako izany ! Lany ! Eny, amin'ny 11 ora alina izao. Inona no tokony ho ataoko ?